सोफियाले श्रीमानलाई घरबाट किन विहे गरेको एकबर्षभित्रै निकालिन् ? | Emedia Hub UK
Home Entertainment Bollywood सोफियाले श्रीमानलाई घरबाट किन विहे गरेको एकबर्षभित्रै निकालिन् ?
नन बनिसकेपछि विवाह गरेकी बोल्ड नायिका सोफिया हयातले एक वर्षपछि श्रीमानलाई घरबाट निकालेकी छिन् । श्रीमानसँग पवित्र सेक्स सिकाउँछु भन्ने यी नायिकाले श्रीमान् भ्लाद स्ट्यान्स्यूसँगको सम्बन्ध समाप्त गरेको जानकारी इन्टाग्रामार्फत दिएकी अबर अहिले विभिन्न अनलाईनहरुमा चर्चा छ ।
आजकाल न्यूयोर्कमा बसिरहेकी सोफियाले श्रीमान शैतान र चोर भएकाले घरबाट निकालेको जानकारी दिएकी छिन् । सोफियाले इन्टाग्राममा उनका श्रीमानले आफू इन्टेरियर डिजाइनर भएको बताएपनि वास्तवमा उनी ऋणमा डुबेका व्यक्ति भएको थाहा पाएपछि उनीसँगको सम्बन्ध समाप्त गरेको जानकारी दिइन् ।
उनले लेखेकी छिन्, ‘मैले उनको खर्च उठाउँथे तर उनी राम्रा व्यक्ति थिएनन् त्यसकारण पनि मैले उनीसँगको सम्बन्ध तोडेको हुँ ।’
सन् २०१७ को मार्चमा सोफियाले भ्लादसँग विवाह गरेकी थिइन् । सोफियाले फेब्रुअरी २४ तारिखमा आफू गर्भवती भएको प्रतिकात्मक तस्बिर इन्टाग्राममासमेत राखेकी थिइन् । एक इन्टरटेन्मेन्ट पोर्टललाई अन्तर्वार्तामा सोफियाले आफूले गर्भमा भएको सन्तान गुमाएको जानकारी दिइन् ।